Iintlobo zeeSmalt 5 Iintlobo ze-Plugin ezibalulekileyo Zonke iimfuno ze-WordPress Site
I-WordPress yinkqubo edumileyo kunye neyona ndlela ihamba phambili yokuphatha umxholo kwaye inikezela ukuguquguquka okungafaniyo kokuqala kwabaqalayo kunye neengcali. Kulula ukuyisebenzisa kwaye ingasetyenziselwa ukudala iiwebhsayithi ezisisiseko neziphambili. Nangona awukho umqhubi wewebhu oqeqeshiweyo, ungasebenzisa i-WordPress ukudala ii-sites ezizodwa. Unemixholo yeemxholo kunye neeplagi ezikhethwa kuzo, kodwa iindidi zeeplagin ezimangalisayo kunye ezibalulekileyo zichazwe ngezantsi nguRyan Johnson Semalt .
Ukhuseleko olujoliswe kwi-bots kunye nabahlaseli kufuneka lube yinto ephambili kuyo yonke i-webmaster kule mihla. Kufuneka ugcine into ekhoyo ukukhusela ukuhlaselwa okuqhelekileyo - umzugsreinigung angebote einholen. Ngombulelo, kukho ezinye iiplagi ezisisiseko neziphambili ukuqinisekisa ukukhuseleko lwakho kwi-intanethi. I-Wordfence yenye yeeplagi eziphambili kunye ezifanelekileyo kunamhla. Inceda ukukhusela iwebhusayithi yakho kwaye iyafumaneka kwiinguqulelo zamahhala kunye ezihlawulwe. Le iplagin inenjongo yokuba isisombululo sakho sonke-inye-ukhuseleko kwaye sinokukuvimba lula ukuhlaselwa kwamandla okutshatyalaliswa kunye nemizamo yokungena ngemvume yelizwe.
Iifowuni zokugcinwa kwedatha:
Uninzi lweenkampani zokubamba zigcina iingcebiso kubathengi bazo, kodwa asikwazi ukuxhomekeka kuzo ngenxa yokukhathazeka kwangasese. Ukuba awufuni ukuba kwindawo yokulahlekelwa kwedatha yakho, kufuneka ufake ifowuni yokukhusela kwi-WordPress ngokukhawuleza..I-plugin eyaziwayo kakhulu ungayenza i-Backup Buddy. Ithuluzi elincinane kakhulu elikuvumela ukuba uhlele i-backups nganye yeveki, yemihla ngemihla kunye nenyanga. Unako ukugcina iifayile zakho kwi-intanethi kunye nokungaxhunyiwe kwi-intanethi, kwaye inzuzo enkulu yale iplagin kukuba imali yokubhaliselwa kwayo i-$ 70 kuphela. Oku kukuvumela ukugcina iifayile ezifikelela kwi-1GB. Yaye ukuba ufuna i-plugin yamahhala, ungazama kwakhona i-BackWupup.
Iiplagi ze-injini zokwenza uphando:
Ukuba ufuna ukutsala abantu abaninzi kwiziko lakho kwaye ufuna ukuba lilungiselele iziphumo zejinjini zokukhangela, kufuneka uzame iiplagi ze-injini yokukhangela kwi-WordPress. I-SEO okanye ukukhangela injini yokukhangela kubalulekile ukudweba abantu kwiiwebhusayithi zakho, kwaye ungasebenzisa iiplagi ezahlukeneyo ukwenza izinto zenziwe. I-WordPress SEO ngo Yoast yiyona iplani engcono kwaye ilungileyo. Isisombululo esibanzi kuzo zonke iingxaki zakho ezihlobene ne-SEO. Inceda ukufaka isihloko se-SEO, inkcazo, amagama asemqoka, kunye neemeta kumaphepha akho ewebhu ngokulula kwaye usindisa ixesha elide.
Iiplagiji zeendaba zoluntu:
Amaziko eendaba ezentlalo ziye zaguqula indlela esabelana ngayo ngama-intanethi kwi-intanethi kwaye sibe yinxalenye ebalulekileyo yewebhu jikelele. Kuba uninzi lwamawebhusayithi, ukuqhuba ukuhamba kwimizila yezokuhlalisana kulula, kwaye ungayisebenzisa ngokunxulumene neefowuni zeendaba zoluntu. Iifowuni zokwabelana nge-AddToAny yi-plugin ebanzi kwaye isetyenziswa ngokubanzi. Iyakwazi ukwenza ngokwezifiso kwaye ikuvumela ukuba wabelane ngomxholo kumaziko ezentlalo zentlalo kalula. Unokuzama kwakhona i-Easy Social Share Buttons ze-WordPress enokuzikhethela ezininzi kunye nezixhobo ukuze uzuze.
Ukuba ufuna ukubeka esweni umgangatho we-website yakho yendlela, ungakhetha ukusebenzisa i-Google Analytics. Nangona kunjalo, ukuba ufuna iinkcukacha ezichanekileyo kunye nangoko, kufuneka ufake i-plugin ye-WordPress ngokukhawuleza. I-Google Analytics iyona isisombululo esihle kakhulu sokuhlaziya i-intanethi. Ikhululekile kwaye idibeneyo ukudibanisa newebhusayithi yakho ye-WordPress. Unako ukulandelela zonke iinqununu, ufumane ulwazi lwexesha langempela kwaye wenze uvavanyo lwe-A / B usebenzisa le program.